Olana amin'ny famoahana mpanoratra mivantana amin'ny WordPress
Vao tsy ela akory izay no nanomboka niteraka olana ny Live Writer, amin'ny tranga roa farafaharatsiny: 1. Rehefa mamorona lahatsoratra vaovao dia mandefa hafatra diso na dia mampakatra aza ny fampidinana na dia nakarina aza ilay lahatsoratra. Avy eo, rehefa manandrana indray, mamorona lahatsoratra vaovao toy izao fa amin'ny fotoana mahamarika ny tranga dia efa misy lahatsoratra maro navoaka ...
3 WordPress Plugins fa izay mendrika ny vola
WordPress dia maneho ny iray amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny fomba ahafahan'ny Open Source ho lasa maodely fandraharahana izay ahazoan'ny tsirairay tombony amin'ny vidiny mirary sy amin'ny fepetra fanompoana izay tsy mila mitsiriritra ilay maodely tompony. Tsy inona izany fa ny lampihazo izay nitaingenany bebe kokoa ...
Internet sy Blogs, Blog sustainability
Cybernetic, mafy ny fanompoana fampiatranoana
Androany dia misy serivisy fampiantranoana maimaim-poana, toa ny Wordpress.com sy Google Blogger antsoina ankehitriny hoe Google Blogs. Saingy rehefa mandeha ny fotoana, ny tranonkala matotra sy ny orinasa dia mitaky serivisy miantoka fiantohana amin'ny sanda ara-toekarena sy orinasa izay asehon'ny fisian'ny Internet. Ao anatin'izany koa dia misy safidy hafa isan-karazany; in ...
Vaovao WordPress 3.3 Sonny
Ny kinova Wordpress vaovao izay tonga rehefa hifarana ny taona 2011, dia mitondra vaovao vitsivitsy, tsy dia lehibe nefa manan-danja: Amin'ny saha misy fiovana, atsangana ny balaonina fampitandremana amin'ny fotoana voalohany nampiasana azy, manondro ny fiovana. Avy eo ny tontonana havia izao fa tsy mivelatra amin'ny hantsana ...
Related Post vinety hiteraka vinety sy ny Plugins
Fotoana vitsy lasa izay dia nesoriko i Arthemia, modely iray manana hatsarana tena tsara ho an'ny Wordpress saingy miaraka amin'ny fatiantoka mampiakatra ny sary kely miaraka amin'ny fiasa timthumb izay mitondra olana lehibe amin'ny fanjifana ny sakan'ny loharano. Taorinan'ny tapakila maro natsangan'ny mpitantana HostGator dia nanapa-kevitra ny hitahiry ny modely ho an'ny ...
403 olana Voarara Error
Mihoatra ny indray mandeha ny zavatra toy izao no nanjo anay, ary rehefa miditra amin'ny tranokalanay izahay dia miseho izao hafatra manaraka izao: Voarara Tsy mahazo alalana hiditra amin'ny /index.php amin'ity mpizara ity ianao. Ankoatr'izay, nisy lesoka 403 voarara nosedraina raha nanandrana nampiasa ErrorDocument hikirakira ny fangatahana ianao. Apache mod_fcgid / 2.3.5 mod_auth_passthrough / 2.1 mod_bw Unlimited / 1.4 FrontPage / 5.0.2.2635 Server…
Fitaovana fampitahana kaody na lahatahiry
Matetika izahay dia manana antontan-taratasy roa izay tianay hampitahaina. Matetika mitranga izany rehefa mampihatra fanovana lohahevitra ao amin'ny Wordpress isika, izay ahitan'ny fisie php tsirairay ny ampahany amin'ilay modely ary avy eo tsy fantatsika izay nataontsika. Toy izany koa rehefa mikasika an'i Cpanel dia mamafa ny rakitra iray isika, na ny fampirimana iray tsy nahavita nampakatra tamin'ny ftp. Fotoana iray hafa, dia ...
Vaovao WordPress 3.1
Tonga ny fanavaozana WordPress vaovao. Betsaka ny zavatra niova tamin'ity sehatra fitantanana atiny ity tato ho ato, ary ny fanavaozana ny kinova vaovao dia bokotra tsotra. Ho antsika izay miaritra izany amin'ny alàlan'ny ftp, indraindray aza dia nieritreritra isika fa ny fahatsorana dia mahatonga ny kaody tsy hanana fahasoavana. ...
Gajes amin'ny fifindra-monina mankany Geofumadas.com
Ary farany, saika nodiovina ny tahiry taorinan'ny fifindra-monina avy ao Wordpress MU ao Cartesianos mankany amin'ny sehatra iray nampiantranoina tao Cpanel. Ho an'ity, plugins maromaro sy fidirana amin'ny phpmyadmin no nampiala voly ahy. Andro sy andro maro - amin'ny fiavahana sy ny fandehanana. Eto aho mamintina andalana vitsivitsy, avy eo mieritreritra aho ...
Internet sy Blogs, My egeomates
Zagg, ny famenon'ny tsara indrindra amin'ny iPad
Ny iray amin'ireo olana lehibe amin'ny fampifanarahana ny iPad dia ny kitendry. Hisy ireo zatra izany, saingy afaka iray volana dia nanatsoaka hevitra aho fa ireo antony ireo dia manakana ahy tsy hanao izany: Amin'ny lafiny iray, matavy loatra ny rantsan-tànako, ary sarotra amiko ny mampiasa ny fitendry. 25 taona aty aoriana dia tiako ny fianarako mitendry ...
Acer hiandrandra Blog iPad Wordpress
Apple - Mac, fanavaozana
Egeomates 3.0: SEO Fanapahan-kevitra
2011 dia midika dingana iray lehibe ao Geofumadas, aorian'ny niasa 3 taona naha-subdomain Cartesian azy. Niresaka momba an'i Tomás izahay, izay isaorako noho ny fahafahany ary antenaiko hitazomana fifandraisana manan-danja amin'ity toe-javatra ity sy ireo toe-javatra hafa nifanena taminay. Cartesians, na eo aza ny fahavoazana nahazo azy tamin'izany ...
IPad, 43 ny toerana tena fampiharana
Milalao, milalao an'ity takelaka ity dia manolo-kevitra ny hijanona tsy hampiasa laptop intsony aho amin'ny fiandohan'ny taona manaraka. Ny tsy fahazoako antoka raha tena hisy izany dia nanjary nitady ireo fitaovana fototra izay manolo ny zavatra ataoko - ary mitsahatra tsy manao - amin'ny fanaoko. Ny maodelin'i Apple miasa dia mahaliana amin'ny ...
Apple - Mac, Internet sy Blogs
Ny lafiny tsara ny Ipad
Ny dia nataoko farany dia nanery ahy hanaiky iPad ho takalon'ny fomba fijery mampiahiahy, eo anelanelan'ny herim-po handoavam-bola amin'ny sidina 11 ora, ny fahatezerana mandeha an-tanety mandritra ny 27 ora noho ny Aeromexico - izay loza- ary manindrona amin'ny soso-kevitry ny ...
Amsterdam sy more
Dia lavitra be. Adiny 2 avy any Amerika Afovoany ka hatrany Miami, adiny 8 mankany Londres, 1 hafa mankany Amsterdam: nanampy ny fotoana fampifandraisana 6 hahatratrarana 17. Nampiasaina ny famantaranandro biolojika rehefa avy natory toy ny bera tao anaty fiaramanidina Fa mbola tsy ny vavony; Ka tamin'ny misasakalina dia tsy maintsy nahita kafe aho ...
My egeomates, Fialam-boly / fitaomam-panahy, Tsangatsangana
Andalana 10 amin'ny andro iraisana
Fa naninona aho no tsy nieritreritra an'io taloha! … Tsia, tsy maty aho. Fiovan'ny subdomain iray monja. Tsy manana ny maha? Tsy namaky ahy ianao roa andro lasa izay. Fanovana tsotra. Loza ny Wordpress MU. Ah, tsy maintsy misy ploka amin'ny farany. Hanavao ihany koa ny Google Maps API, sy Live Writer. Hey! Google dia mahafinaritra.…
Eny eny, hametraka WordPress
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha, nahita ny fomba fampidinana sy fampidirana Wordpress amin'ny fampiantranoana izahay. Andao hojerentsika ny fomba fametrahana azy io. 1. Mamorona ny angon-drakitra Ho an'ity, ao Cpanel, mifidy ny MySQL Databases izahay. Eto izahay dia manondro ny anaran'ny tahiry, amin'ity tranga ity dia hampiasa sigara aho ary hanindry ny bokotra famoronana. Jereo ny fampisehoana ...